porn ငါ၏အပြဿနာများကိုဖြေရှင်းနိုင်ရပ်တန့်ကြမည်နည်း - Porn တွင်သင့်ဦးနှောက်
porn ကိုရပ်တန့်ငါ့ပြproblemsနာများကိုဖြေရှင်းနိုင်မလား Porn သည်အမှန်အားဖြင့်သင်၏ဘိုးဘေးများအားမိတ်ဆွေကဲ့သို့သောသာယာဝပြောမှုခံစားခွင့်ကိုပေးသောနေ့စဉ်အပျော်အပါးများကိုအစားထိုးသည်။ ဤသည်ညစ်ညမ်းရပ်တန့်မလုံလောကျကြောင်းဆိုလိုသည်။ သငျသညျသာယာဝပြောရေးသူတို့ကသဘာဝရင်းမြစ်များပြန်လည်ရှာဖွေရန်အတွက်လိုအပ်ပါတယ်။
ကံမကောင်းစွာပဲစွဲလမ်း၏အမြင့်ဆုံးကုန်ကျစရိတ်၏တဦးတည်းက (overstimulates ပြီးတော့ထုံ) သင်ကြိုးများနှင့်ပွော့အခြားသူများနှင့်ဆက်သွယ်မှုကိုရှာဖွေအပေါ်အားကိုးသောအလွန်ဦးနှောက် circuitry ပုန်းကွယ်တိုက်ခိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျတုံးဦးနှောက် sensitivity ကိုကြောင့်သိမ်မွေ့အပျော်အပါးခံစားနိုင်ကြမဟုတ်ပါဘူးအခါ, စကားပြောဆိုမှုနှင့်ချစ်ခင်အဓိပ္ပာယ်မဲ့ပုံရသည်။ အဲဒီအစားနူးညံ့ကြင်နာမှု၏, သင်ရုံ "အာကာသ" နှင့်အစွန်းရောက်လှုံ့ဆော်မှုချင်သောခံစားရနိုင်ဖွယ်ရှိပါတယ်။
ဤသူသည်သင်တို့ခံစားနေကြပုံကိုဖြစ်တယ်ဆိုရင်, သင့်အူခံစားချက်များကိုလျစ်လျူရှုပြီးဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ထွက်ရောက်ရှိဖို့သင့်အတွက်အကောင်းဆုံးလုပ်ပါ။ သငျသညျကွာသင့်ရဲ့လေ့ကနေသင့်ရဲ့အာရုံကိုအတင်းလိုက်တဲ့အခါ "ကယ်ဆယ်ရေး" သင့်ရဲ့ဦးနှောက်ထဲမှာဆုလာဘ် circuitry ပျော်မွေ့၏အခြားသတင်းရပ်ကွက်များအဘို့အလှည့်ပတ်ကြည့်ရှုသည်။ ဒါကြောင့်ထွက်ဖော်ရွေအပြန်အလှန်, အစစ်အမှန်အိမ်ထောင်ဖက်, သဘောသဘာဝအတွက်အချိန်, လေ့ကျင့်ခန်း, အောင်မြင်ခြင်းနှင့်: ကလွယ်ကူသောသင့်ဦးနှောက်ကတွေ့ရှိရန်ပြောင်းလဲကြောင်းအပျြောအပါးမြားရင်းမြစ်များမှအကြိုးအတှကျလုပ်ပါ။
ညစ်ညမ်းမှုကိုဖြတ်လိုက်ခြင်းကငါ့ရဲ့ပြproblemsနာတွေကိုဖြေရှင်းပေးနိုင်မလား။ အများအားဖြင့်၊ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံလွှာအသုံးပြုသူများသည်ညစ်ညမ်းမှုကိုချန်ထားစဉ် ပို၍ လွယ်ကူကြောင်းတွေ့ရှိရသည် ပိုမိုလွယ်ကူသွားလာခြင်းမှ, ပတ်ပတ်လည်ဟာသ, ပရောပရည်နှင့်။ အခြားသူများနှင့်ချိတ်ဆက်ရန်အချက်တစ်ချက်ကိုပြုလုပ်ခြင်းဖြင့်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုအရှိန်မြှင့်ပါ။ ၎င်းကိုသင်မခံစားမိမီပင်။ ဒီမှာပါ အတွေးအခေါ်များစာရင်း ့ပြုပါရန်နည်းလမ်းများသည်။ သငျသညျအခြို့သောစိတ်ကျေနပ်စရာဆက်သွယ်မှုနှင့်တွေ့ပါကလူမှုရေးဦးနှောက်ချိန်ခွင်လျှာတိုးတက်ကောင်းမွန်ကြောင့်ထိုသို့ပြုလွယ်ရရှိသွားတဲ့ကြောင်းကို၎င်းအောက်မေ့နိုင်ရန်အတွက်ရန်လိုအပ်သကဲ့သို့အများအပြားကြိုးစားပါ။ ချိတ်ဆက်မှုတစ်ဦးကအဓိပ္ပာယ် relapse ဆန့်ကျင်ကြီးမြတ်အာမခံသည်။ အပိုဆောင်းရယူလိုက်ပါ အစဥ္မျပတ္ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတတ္မႈအတြက္ ရပ္တည္လုပ္ေဆာင္ရန္။ သင်လိုအပ်ခံစားရလျှင်သို့မဟုတ်ဆုံးမ။
White က-လက်သင့်ရဲ့ပြန်လည်နာလန်ထူတည်ငြိမ်ရန်လုံလောက်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ အမှန်မှာလူသားမြားသညျအနညျးဆုံးမကွာသည်, မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်အပေါ်ကောင်းစွာသူတို့ရဲ့စိတ်ခံစားမှုကိုထိန်းညှိလို့မရဘူးဖြစ်ပါသည်။ တိုက်ပိတ်ခံရအတွက်အကျဉ်းသားများမကြာခဏရူးသွားပါ။ အထီးကျန်သည့်အခါတစ်နည်းမှာ, စိုးရိမျသို့မဟုတ်စိတ်ဓာတ်ကျခံစားရရန်ပုံမှန်ပါပဲ။ စကားကိုတတ်သကဲ့သို့ "နှောင်ကြိုးများကိုမယ့်အကောင်းတစ်စိတ်ကူးမျှမက, ဒါကြောင့်ပညတ္တိကျမ်းဖြစ်ပါတယ်။ "ဒါဟာလည်းဂြိုလ်ကမ်းလှမ်းအကောင်းဆုံးကိုကျန်းမာရေးအာမခံအချို့ဖြစ်ပါတယ်။
သငျသညျသာမန်အခြေအနေများတွင်လူသားများအပျြောအပါး၏အခြားသတင်းရပ်ကွက်များကထက်ပိုမိုပူးတွဲမှုတစ်ခုလိုအပ်နေခြင်းဖြင့်မောင်းနှင်ကြသည်ကိုငါတို့သိကြ၏သလား? (ကြည့်ရှုပါ တစ်ဦးနှောင်ကြိုး Disorder အဖြစ်စွဲ ဖိလိပ္ပုသည်ဂျေ Flores အားဖြင့်) ကြှနျုပျတို့သ လိုအပ်ချက် ဒီအလှနျမှီခိုမဟုတ်ပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ကလေးဘဝသော့ချက်အချက်များမှာ Freud postulated, ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝတွေကိုတစ်လျှောက်လုံးအဖြစ်။
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟာလူမျိုးစုဆိုင်ရာ၊ စုံတွဲတွဲစပ်မျောက်ဝံများဖြစ်ဖို့ကြိုးတပ်ထားလို့ပဲ။ မျှတမှုရှိလျှင်အနီးကပ်၊ ယုံကြည်စိတ်ချရသောပေါင်းသင်းမှုနှင့်နွေးထွေးသောချစ်ခင်မှုတို့ (သင်လေ့ကျင့်ခန်း၊ အောင်မြင်မှုစသည်ဖြင့်) ရှင်သန်နိုင်သည်။ အဖော်သည်ကျန်းမာသော dopamine နှင့် Oxytocin ကဲ့သို့သော“ ကောင်းသောခံစားမှု” ရှိသည့် neurochemicals များကိုသင့်ကိုဟန်ချက်ညီစေရန်ကူညီပေးသည်။
အခြားသူများနှင့်ဆက်သွယ်မှုမှရရှိသောအကျိုးအမြတ်များသည်အလွန်မှန်ကန်သောအသုံးအနှုန်းများဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်ဆက်သွယ်မှုသည်စိတ်ဖိစီးမှုအောက်ရှိသင့်ကိုယ်ခံစွမ်းအားစနစ်အားနည်းသွားစေသည့် cortisol (“ stress hormone”) ကိုလျှော့ချပေးသည်။ စိတ်ပညာရှင် / အာရုံကြောဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင်က“ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့မှာအဲဒီမှာတစ်ယောက်ယောက်ရှိမယ်ဆိုရင်ငါတို့မှာ ၀ တ်ဆင်စရာမရှိတော့ဘူး” ဟုရှင်းပြသည်။ ဂျိမ်းစ်အေ Coan.
မရအံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်တစ်ဖက်နှင့်အတူ HIV ပိုးလူနာအသက်ပိုရှည်နှင့်ဖွံ့ဖြိုး ဒီထက်လျှင်မြန်စွာ AIDS။ အနာရောဂါကိုငြိမ်းစေ နှစ်ကြိမ်အဖြစ်အစာရှောင်ခြင်း အဖော်နှင့်အတူအထီးကျန်မှုတွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်အဖြစ်။ စုံတွဲများအကြားနွေးထွေးသောထိ စိတ်ဖိစီးမှုအမျိုးမျိုးအတိုင်းအတာလျော့ကျစေပါတယ်။ မကြာခဏချစ်ခင်ပုံမှန်အားဖြင့်အလွန်ပွော့နှင့်မျိုးစိတ်-နှင့်အတူသို့မဟုတ်လိင်မပါဘဲကပ်လျက်တည်ရှိတရံကြိုးဖြစ်ပါတယ်။
သို့သျောလညျးကိုအနီးကပ်ချိတ်ဆက်မှုအများဆုံးလေးနက်တဲ့လက်ဆောင်တွေစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်နိုင်သည်။ အနီးကပ်စိတ်ခံစားမှုဆက်သွယ်မှုနဲ့ဆက်စပ်နေကြသည် စွဲလမ်း၏အနိမ့်နှုန်းထားများ နှင့် စိတ်ကျရောဂါ။ သင်သည်ထိုသူတို့အတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာသူတို့ကကိုယ့်ကိုယ်ကိုသင့်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကျားကန်ခြင်းနှင့်စာနာမှုနှင့်လူမှုရေးဖြစ်နိုင်သောအောင်, သင့်အာရုံကြောပုံစံများနှင့်ဦးနှောက်ဓာတုဗေဒပြောင်းပေးပါ။
တစ်ခုစွဲကျော်လွှားခြင်းဆက်ဆက်ကပိုမိုလွယ်ကူသင်၏အသက်တာတွင်အခြားစိန်ခေါ်မှုများဖြေရှင်းရန်စေသည်။ မတရားသောတောင်းဆိုမရှိရင်သင့်ဦးနှောက်ကိုပိုမိုမျှတတဲ့ဖြစ်ပါတယ်နှင့်သင့်စဉ်းစားတွေးခေါ်ပိုပြီးပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ဖြစ်လာသည်။ သငျသညျတစ်ခုလုံးကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံပိုကောင်းနှင့်သိမ်မွေ့အပျော်အပါးဘဝကပိုစိတ်ဝင်စားဖို့စေသည်ရာ, တဖနျအဖြစ်ပျော်စရာမှတ်ပုံတင်ရန်တွေ့နိုင်ပါသည်။ ဤတွင်နှစ်ဦးကိုပြန်လည်ထူထောင်အသုံးပြုသူမှတ်ချက်နေသောခေါင်းစဉ်:
ငါ p / m အရာသို့အကြီးအကျယ်အခါဘဝကပို "မှိုင်း" ဖြစ်ခဲ့သည်။ ကိုယ့်ဘဝကဒီလိုဖြစ်ခဲ့တာပဲ၊ p / m ဆိုတာကဘဝရဲ့အခြေအနေကနေခေတ္တသက်သာသွားတယ်။ ယခုတွင်ငါသည်ဘဝ၏အဖြစ်မှန်မှပိုမိုပျော်ရွှင်မှုရရှိသည်။ ကောင်းသောစကားပြောဆိုမှု၊ သီချင်းကောင်းကောင်း၊ လေ့ကျင့်ခန်းကောင်းများ၊ ကျောင်းစာလုပ်ပြီးနောက်ပြီးမြောက်အောင်မြင်ခြင်းခံစားချက်။
PMO သည်သင်၏ပင်ကိုစရိုက်ကိုများစွာပိုင်ဆိုင်သည်။ ပြီးခဲ့တဲ့ ၈ ပတ်အတွင်းမှာကျွန်တော်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည့်အတိုင်းကျန်းမာသန်စွမ်းသော၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလောင်ကျွမ်းသောယောက်ျားများသည်ယုံကြည်မှုရှိရန်မလိုအပ်ပါ။ ယုံကြည်မှုဆိုတာကိုယ့်ရဲ့သဘာဝအခြေအနေကနေစီးထွက်လာတဲ့အရာပဲ။ ဤ“ Mojo” သည်လိင်မှုကိစ္စထက်မကပါ ၀ င်သည် - ၎င်းသည်အခြားဒေသများအားလုံးသို့ - အကောင်းမြင်ခြင်း၊ စိတ်အားထက်သန်မှု၊ ချစ်ခြင်းနှင့်ဂရုစိုက်ခြင်း၊ ယခုတွင်ငါသည်ပြောခြင်းနှင့်အကျင့်ကိုကျင့်ခြင်းနှင့်အဘယ်ကလာသလဲဟုတွေးမိ, ငါကအရင်စဉ်းစားရန်မလို, ဒါကပဲငါ့ဆီကထွက်လာတယ်။ နောက်ဆုံးတော့ဒီဟာကလူတွေပုံမှန်အားဖြင့်ပဲဆိုတာသဘောပေါက်လာတယ်။ စီးဆင်းရုံ…
ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏အတွေးများကိုအချိန်ကြာမြင့်စွာကတည်းကစီမံထားပြီးဖြစ်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်လိုအပ်သည်။ ငါ့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကအရမ်းကိုမရှိတာကြောင့်ငါ့ရဲ့အပြုအမူတွေကိုပုံမှန်ဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့လိုတယ်၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုကင်းမဲ့အောင်လုပ်တာကလူတွေကိုငါမယုံဘူးဆိုတာသတိမထားမိစေဖို့ပဲ။ အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှမင်းဟာမြင်းစီးသူရဲကိုပိုပြီးစီးနင်းနေတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်။ သင်ကိုယ်တိုင်ရိုက်ချက်များကိုခေါ်ခြင်းဖြင့်သင်ဖြစ်ခြင်းထက်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်စိတ်နှင့်သင်သွားရမည့်နေရာကိုခေါ်ဆောင်သွားသည်။ ဒါဟာအစပိုင်းတွင်အနည်းငယ်အလန့်တကြားဖြစ်သော်လည်းအမှန်တကယ်လမ်းဖြစ်သည်။ ဒါ့အပြင်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကာလမှာတစ်ခါတစ်လေမှာ misfiring (သို့) ရှုပ်ထွေးတဲ့နည်းလမ်းတွေနဲ့သွားရှာတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။ ချွေးမချပါနှင့် - ၎င်းသည်မြန်မြန်ဆန်ဆန်ချိန်ကိုက်ပြီးလုပ်ငန်းစဉ်၏အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်။
ပိုပြီးအဘို့: porn, တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေခြင်းနှင့် Mojo: တစ်ဦးကအာရုံကြောသိပ္ပံအမြင်
ငါကဒီမှာမျှဝေပါလိမ့်မယ်တစ်ဦးစေ့ဆော်မှုအဖြစ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်အဘို့ဤ Pro ကို / ကွန်းစာရင်းဖန်ဆင်းတော်မူ၏။
Pro ကို - ဘယ်သူမျှမ PMO
• သာ. ကောင်း၏အိပ်စက်ခြင်း
•မင်္ဂလာနှင့်အခြားသူများနှင့်အတူစိတ်ဆိုးစေခြင်းငှါနည်းဖွယ်ရှိလူတွေကို / ကြည့်ဖို့စိတ်လှုပ်ရှား
•ကွာလူမှုရေးအခြေအနေများမှ shying မဟုတ် / လူမှုရေးဖြစ်ခြင်းမှာ သာ. ကောင်း၏
•အခြားသူများကိုကူညီပေးဖို့ သာ. ကောင်း၏နိုင်ခဲ့နှင့်အခြားသူများကိုထိခိုက်လျော့နည်းဖွယ်ရှိ
• / အလွယ်တကူဖျားနာလျော့နည်းနေမကောင်းမရရှိပါသလား Get
•အမျိုးသမီးများကိုကန့်ကွက်ခြင်း / ၎င်းတို့၏မျက်နှာများကိုပိုမိုကြည့်ခြင်း
• Irregular စိတျအပွောငျးအလဲ
• 1 ရဲ့များပြားလွန်းခြင်း, 1000 အလုံအလောက်မရ